तपाईं पनि राजनीतिमा ? | Jukson
पोखरा, पुस १९
‘तपाईं पनि राजनीतिमा रु’ यो प्रश्नले अघिल्ला केही महिना पूरै अलमल्यायो । किशोरवयमा गरेको जहानियाँ राजनीतिलाई बिर्सेर पूरापूर व्यवसायमा लागेको पनि निकै भएको थियो । प्रश्न नाजायज थिएनन् । बारम्बारका प्रश्नले घरिघरि यस्तो पनि लाग्थ्यो, कतै राजनीतिको मेलो समातेर मैले गलत त गरिनँ रु प्रश्नलाई माथ गर्न पनि प्रश्नै सोचेँ र आफैँलाई सोधेँ – के राजनीति सामान्य ‘कप अफ टी’ होइन र रु एक कप चियाका लागि किन तथानाम सोच्नुपर्छ मैले ?
मन–शान्तिका लागि कित्लीमा उमालेको केही कप चिया सकियो । तर चियासँगै उम्लिएको मन झन् अशान्त भएर आयो । अहँ, द्विविधा सकिएन । भन्छन्, मान्छेको जिन्दगी रोजाइहरुको फेहरिस्त मात्रै हो । मान्छे हरेक क्षण अनेकन विकल्पका अगाडि उभिएको हुन्छ । उसलाई कुन विकल्प रोज्ने भन्ने स्वतन्त्रता त हुन्छ तर कुनै पनि नरोज्ने स्वतन्त्रता हुँदैन किनकि कुनै नरोज्नु पनि एउटा विकल्प हो । फेरि द्विविधा मेट्छु, राजनीति नगर्नु पनि एउटा राजनीति नै हो । भोट नहाल्नु पनि एक प्रकारको मतदान नै हो । यसले पनि कुनै न कुनै व्यवस्था र दललाई फाइदा वा बेफाइदा पुर्याकएकै हुन्छ ।
‘तपाईं पनि राजनीतिमा रु’ सायद २० वर्षअघि पाकिस्तानमा इमरान खानलाई कैयौँ पटक सोधिए होलान् रु म एक ‘आम आदमी’ न हुँ । ‘तपाईं पनि राजनीतिमा रु’ पाँच वर्षअघि भुटानका लोते छिरिङलाई कति सोधियो होला रु म एक किसानको छोरा न हुँ ।
सफल क्रिकेटर भए पनि इमरानलाई पत्रकारको बलशाली बलिङका अघिल्तिर तर्कको क्रिज सम्हाल्न कति गाह्रो भयो होला रु छिरिङ चल्तीका सर्जन थिए तर जतनसाथ प्रश्नको पोस्टमार्टम गर्न उनलाई कति गाह्रो भयो होला ?
म त सामान्य पेसाकर्मी हुँ । गरिखाने एउटा औसत कारिन्दा हुँ । मेरा दुस्ख साना हुन् । मेरा द्विविधा पनि सामान्य हुन् । राजनीतिका नाममा मैले गर्नुपर्ने त्याग पनि सामान्य हुन् । मेरो जिन्दगी नै एक सामान्य हो । अनि म सामान्य मान्छेका लागि राजनीतिमा होमिने निर्णय कसरी असामान्य हुन्छ रु कसरी असजिलो हुन्छ रु कसरी परिवार, साथीभाइका लागि विरक्तिलो हुन्छ रु म पूरापूर निष्कर्षमा पुगेँ कि राजनीति भनेको खासमा एक कप चिया नै हो । सामान्य काम । मनको तर्कनाले चित्तको बाटो समातेपछि ढुक्क भएँ ।
अर्थ एउटै हुँदैमा शब्दको मिठास र महिमा उस्तै हुँदो रहेनछ । राजनीति पनि त्यस्तै त हो । युरोप, अमेरिका, इमरान, डा छिरिङ, मोदी, राहुल गान्धी र नेपालका राजनीतिज्ञ अनि म बबुरो महेशको राजनीति । मलाई थाहा छ, अर्थ एउटै भए पनि यी राजनीतिको मिठास र महिमामा फरक छ । यसलाई ‘अन्तराल’ जस्तो सुन्दर बनाउने कि ‘ग्याप’ जस्तो विद्रुप रु त्यो मेरो हातमा छ ।
फ्रेमभित्र घुसेका प्रकाण्ड अलिकति भूत, अलिकति वर्तमान बोकी हिँडेका छन् । उनी कम बेवास्ता, आकर्षण र चयनमा छैनन् यतिखेर । अस्थिरता जतासुकै छ, आकर्षण पनि जतासुकै छ । आम आदमीमा अलमल छ । विचार उत्तिकै बलिया छन्, भूत फेरि उत्तिकै कमजोर पनि । जिन्दगी विचारले जिउने कि भूतले रु जनता सोध्दैनन् । चुनावमा आफैँ उत्तर दिन्छन्, दिए र दिइरहेका छन् । फेरि दिनेछन् ।
मैले प्रेम गरेर पढेको देङ स्याओ पिङको ब्लू प्रिन्ट धमिलो भएछ, सी जिन पिङको माओ ब्रान्डको नक्सामा । सी जिन पिङप्रति हिमालजस्तै विश्वास राख्ने चिनियाँ युवाले माओलाई म्युजियममा मात्रै सम्झन्छन् । हिजोका देङ स्याओ पिङलाई बिर्सेझैँ गर्छन् । सम्झँदा कुनै स्वार्थ छैन, डर पनि छैन, प्रेम पनि छैन । भयरहित स्मृति–यात्रामा प्रेम हुँदैन । किलोमिटर र माइल मात्रै हुन्छ । ल्यान्डमार्क र डेस्टिनेसन हुन्छ । प्रेमरहित त्यही यात्राले विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रमा चीनलाई लग्दैछ । यो कुरा दिइकोनोमिस्टको कभर कथाले भनेको हो ।
गंगामा पानी यति धेरै बगेछ कि अहिले त्यही पानी खाएर हुर्केको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चिनियाँ सरकारलाई ठाडै गाली गर्दो रहेछ, जसरी नेपालका प्रचण्डले कुनै बेला अमेरिकालाई गर्थे । यो कुरा नपचे पनि पचाउनैपर्छ । भारतीय कम्युनिस्टका लागि चीन गलत छ । तर माओ गलत छैनन् । चीनले देङ स्याओ पिङलाई समेत सही भन्न छाड्यो । सी जिन पिङले अब जित्ने अमेरिकालाई हो । हार्न कसैसँग पर्दैन । माओको देशले अमेरिकालाई जितेपछि त्यो जितमा हाम्रा मोहनविक्रम सिंह र मोहनचन्द्र अधिकारीको फुटनोट के होला रु नेपाली माओवाद निश्चित छैन ।
‘तपाईं पनि राजनीतिमा रु’ धेरै जवानलाई अझ धेरैले सोधिरहने राष्ट्रिय प्रश्न बन्दैछ यो । प्रश्नमा शक्ति छ । यही प्रश्नले भुटान र पाकिस्तानभन्दा अगाडि लैजान्छ देशलाई ।
संगते जायते फल:
५० हजारमा ठुला सवारी साधनको लाइसेन्स बिकी गर्ने सात जना निलम्बित
मन्त्री कृपासुरले दलित महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप 'छोरा' भन्छन्- बाबु मन्त्री भए, मैले नागरिकता पाइँन